Ø Dagaalo dhex maray ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada xoreunta ogadeenya.
Ø Xubno guddiga fulinta ee EPRDF ah oo xilalkoodii laga eryay.
Ø Jabuuti oo xukuumadda Itoobiya alaab Dakedeeda u taalay ganaax ku soo rogtay.
Ø Ururka macalimiinta Itoobiya oo mudaharaad isu diyaarinaya.
Ø Isayas Afwareke oo ka qayb galay shir Tokyo lagu qabtay.
Ø Faallo ku saabsan barnaamijkii Kaftan maaha kulanka Waaberi ee horta maxaa isu keenay.
Ø Todobaadkan iyo geeska Afrika waxyaabihii ugu waaweeynaa.
Ø Waraysi aanu la yeelanay Fanaanada Caanka ah ee Hobo Maxamed (Hobo Nuur) iyo waliba waxyaabo kale oo mihiim ah.
Dagaalo dhex maray ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada xoreunta ogadeenya.
Dagaalada dhex maraya ciidamada Gobonimadoonka Xoreeynta Ogaadeenya iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa ah kuwo marba marka ka danbeeysa sii xoogaysanaya, kuwii u danbeeyayna waxay dheceen xiliyadan.
24.09.03 waxuu dagaal khadhaadh ku dhex maray ciidamada Geesiyiinta Xoreeynta Ogaadeenya iyo ciidamada dulmiga waheshada ee gumaysiga Itoobiya galbeedka Magaalada Garbo, halkaasna waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 1 Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 Askari oo kale. Ciidamada Itoobiya oo duulaankaas soo qaaday ayaa la sheegayaa in ay weerakaas ku soo jabeen oo firxadkoodii mid mid magaalada u soo galeen kadib markii ay dagaalyahamiinta xoraynta Ogaadeenya difaac aan la gudbi karin.
Xubno guddiga fulinta ee EPRDF ah oo xilalkoodii laga eryay.
Shirwaynihii uu Isbahaysiga EPRDF dhawaan ku qabsaday magaalada Baxardaar, waxa jagooyinkii ay hayeen lagaga qaaday 7 nin oo ka tirsanaan jiray guddiga fulinta ee EPRDF.
Nimanka xilalkoodii laga qaaday waxaa ka mid ah Mulugeeta Alamsagadh, oo muddo dheer la-taliye u ahaa keligii taliye Meles Zenawi, waxaana lagu beddalay Abay Sahay, oo hadda noqday ninka Afraad ee Isbahaysiga EPRDF.
Ninmanka ka tirsanaa guddiga fulinta ee EPRDF ee xilalkoodii laga qaaday waxay kala yihiin:
1- Dr. Kabadhe Tadhase
2- Alamayhu Asmina
3- Mukhtar Khadar
4- Ismaciil Ero
5- Dharota Dhajaamo
Waxaana boosaskoodii lagu beddalay nimanka kala ah:
1- Abbay Sahay
2- Filmon Hadero
3- Shifaraw Shegotanaa
4- Aydhaki Gasahin iyo kuwo kale.
Warku wuxuu kaloo intaas raaciyay in ururrada isku bahaystay EPRDF oo dhan aan xubno cusub loogu soo darin Golaha Dhexe ee hadda la dhisay, balse qaar ka mid ah Loo kordhiyay xubnihii golaha dhexe..
Ururrada xubnaha cusub loogu daray Golaha Dhexe ee EPRDF waxay kala yihiin labada Urur ee Xabashida iyo midka maqaar-saarka ah ee Oromada. Waxaan iyaga Golaha
Dhexe xubno intii hore ka badan loogu soo darin ururka dadyowga koonfurta Itoobiya.
Jabuuti oo xukuumadda Itoobiya alaab Dakedeeda u taalay ganaax ku soo rogtay.
Dawlada Jabuuti ayaa xukuumadda Itoobiya ugu baaqday inay sida ugu dhakhsaha badan ula baxdo alaabo fara badan oo muddo dheer ka taallay dekada Jabuuti, isla markaana ay lacag adag oo doollarka Maraykanka ah alaabtaas ka bixiso, waxayna arrintani ka denbaysay, ka dib markii ay alaabtaasi si wayn u xayirtay hawlihii dekada magaalada Jabuuti.
Dawlada Jabuuti waxay sheegtay in alaabtaasi ay dhaaftay xilligii loogu talagalay in dekada lagaga bixiyo, waxayna sheegtay in qaanta alaabtaas lagaga leeyahay dawlada Itoobiya lagu bixin karo lacag adag oo kaliya.
Wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Itoobiya ayaa daboolka ka qaadday in lacagta Itoobiya laga doonayo ay tahay lacag aad u fara badan, oo maalin walba gaadhaysa boqollaal kun oo doollar, taasoo khasaare ba’an u keeni doonta dalka Itoobiya.
Ururka macalimiinta Itoobiya oo mudaharaad isu diyaarinaya.
Wariyaha Wakaaladda Wararka Ogadeniya ayaa sheegaya inuu Ururka Macalimiinta ee Itoobiya isu qabanqaabinayo mudaharaad aad u ballaadhan oo lagaga soo horjeedo nidaam cusub oo xukuumadda Wayaanuhu ay soo saartay.
Mudaharaadkan, oo la filayo inay boqollaalan kun oo macalimiin ah ka soo qaybgalaan, waxay macalimiintu kaga cabanayaan xadgudubyo loo gaysto oo ay ka mid yihiin iyagoo shaqooyinka laga caydhiyo haddii ayna taageerin aragtida EPRDF oo ayna ka mid noqonin
waxa ay ku sheegaan kaadiriinta u adeega.
Waxaa kaloo ka mid ah arrimaha ay ka cabanayaan nidaamka cusub ee xukuumaddu ay dejisay ee waxbarashada gaarka ah lagu oggolaanayo.
Guddoomiyaha Ururka Macalimiinta Dr. Taaye ayaa sheegay in dawladu ay horay ugu guul-darraysatay adeegyada bulshada ee caafimaadka iyo waxbarashadu ay ka midka yihiin, haddana ay waalidiinta dhibaatooyin badan la soo gudboonaan doonaan haddii waxbarashada gaar laga dhigo. Wuxuu kaloo intaas ku daray in nidaamkani uu yahay nidaam loogu danaynayo dad gaar ah, oo aan dunida horay loogu arag.
Isayas Afwareke oo ka qayb galay shir Tokyo lagu qabtay.
Madaxwaynaha waddanka Eritereya Isayas Afwareke ayaa ka qayb galaya shir caalami ah oo lagaga hadlayo horumarka Afrika, kaasoo ka dhacaya magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Madaxwayne Isayaas waxa u madadii u halkaas joogay soo booqday xarunta ”doonta nabda ee Tokyo”, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay Mr. Yoshiko Tasuya.
Madaxwayne Isayas oo shirkaas ka hadlay wuxuu aad ugu mahad-naqay dawlada Japan sida gacmaha furan ee ay u soo dhawaysay iyo sida ay dadaalka ugu jirto sidii loo horumarina lahaa Qaaradda Afrika.
C/Nuur Sh. Maxamed.
Faallo ku saabsan barnaamijkii Kaftan maaha kulanka Waaberi ee horta maxaa isu keenay?
Magaca loo bixiyay barnaamijkan kor ku xusan, oo gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka lagu qabtay 27 sebtember 2003, wuxuu u muuqdaa mid markii horaba loogu talagalay inuu ka turjumo ahmiyada uu leeyahay barnaamijku iyo macnaha uu xanbaarsan yahay. Waxaa hubaal ah in dadkii magac-bixinta barnaamijka ka denbeeyay ay ahaayeen kuwo Eebe ku mannaystay xikmad hal-abuurnimo, isla markaana si wayn ugu xeel-dheer fahanka afka soomaaliga ah.
Waxay magac-bixinta barnaamijku si fiican ugu qotontaa xirfadaha ay isticmaalaan dadka saxaafadda isku hawla, kuwaasoo rumaysan in qiimaha iyo mudnaanta maqaalku ayna ka soo hadhin magiciisa. Si aan u fahanno in magaca barnaamijka si fiican loogu saleeyay xirfadahaas iyaga ahna, waxaan soo qaadanaynaa magaca qaybtiisa ugu horraysa Kaftan maaha kulanka Waaberi iyo qaybtiisa denbe ee Maxaa isu keenay.
Kaftan maaha kulanka Waaberi, waxay akhristaha ama qof kasta oo daalacda ku baraarujinaysaa in kulanka Waaberi uu yahay mid muhiim ah oo ”mar-la-arag” ah. Waxay kaloo ku baraarujinaysaa in arrinta Waaberi kulmisaa ay tahay arrin muhiim ah, maadaama ay hooballada Waaberi yihiin Hooballadii Qaranka ee ummada soomaaliyeed oo dhami ay ku dhaadan jirtay, meel kastoo ay joogto, isla markaana aan la arag, lana maqlin iyagoo madal ku wada-kulmay intii ay burburtay dawladii Soomaaliya.
Maxaa isu keenay” iyadu sharraxaad badan uma baahna. Waa su’aal. Su’aalna waxay ku furfurantaa jawaab laga bixiyo oo kaliya. Waxaa markaas hubaal ah in qof kastoo magacan akhriya uu jeclaanayo inuu ogaado sababta isu keentay. Waxaa laga yaabaa inuu is-waydiiyo waxyaalo badan oo uu rabi lahaa inuu ogaado, balse aanuu ku guulaysanin, taasoo keenaysa inuu baadi-goobo sidii uu ku ogaan lahaa. Sida kaliyee uu ku ogaan karana waa inuu barnaamijka galo ama raadiyo xogo badan oo ku saabsan, waana middaas sirta ku qarsoon su’aasha barnaamijka loogu wan-qalay.
Haddii aan eegno dhinaca hooballada barnaamijkan ka qayb qaatay, aan soo qaadano: Maxamuud C/llaahi (Singub), Xasan Aaden Samatar, Saado Cali Warsame, Hibo Maxamed, Axmed Cali Cigaal, Shankaroon, Khadiija Boqran, Cadar Axmed Kaahin, Luul Jaylaani, Maxamuud Jangow, Cabdi Janan iyo Kimiko.
Qof kastoo si wanaagsan u yaqaanna hooballada soomaaliyeed ee casrigan jira ee daalacda magacyada aan kor ku soo xusnay, waxaa hubaal ah inuu markaba la soo boodi lahaa, waa xiddigihii Soomaaliya”, isla markaana uu ku doodi lahaa in xirfad faneedkii iyo maskaxdii hal-abuurnimo ee soomaalida aan waxba ka maqnayn.
Wuxuu markaas qiri lahaa in arrinta isu keentay ayna ahayn mid caadi ah oo madadaalo iyo maal-uruursi looga jeedo, ee ay tahay qadiyad intaas ka qodda-dheer oo u qalanta miisaanka ay Hooballada Qaranku siiyeen, dadwaynuhuna ay ku qaayibeen.
Dareenkii wax-raadineed ee akhristaha ay su’aashii kore ku beertay wuxuu biya-dhiciisii noqday in qadiyada miisaankaas leh ee barnaamijkan muhiimka ah loo qabtay ay tahay Qadiyada Soomaalida Ogadenya. Akhristihii soomaaliyeed ee haybad Qaranimo beri hore ka quustay hullaabtii ayuu markaas iska qaaday oo wuxuu ku hammiyay Allaylahee hooballadii waxay guteen waajib Qaran oo ummadii kale ee soomaaliyeed ee ka seexatay, wuxuuna isku canaantay sababta uu isagu Qadiyadaas wax u taaran wayaay.
Muwaadinka soomaalida Ogadenya ayaa isaguna ku sii dhiirraday soomaalinimadiisii oo ogaaday in difaaca sharafta soomaalinimada iyo soo dhicinta xaqa soomaalida Ogadenya lagu weheliyo oo aan wali la duugin qiiradii isu-hiilinta ahayd ee ummada soomaaliyeed ka dhaxaysay, taasoo ay xukuumadaha Itoobiya aasiddeeda ku dadaalayeen kontankii sano ee ugu denbeeyay.
Wuxuu muwaadinka Ogadenya wali niyadda ku sii hayaa taageeradii hagar la’aanta ahayd ee hooballada soomaaliyeed ay waligood la garab taagnaayeen qadiyada xaqa ah ee Ogadenya. Wuxuu muwaadinka Ogadenya yiqiinsaday in hooballada Qaranku ay wali heegan u yihiin inay halkoodii ka sii wadaan u hiilinta xaqa iyo ka hortegga dulmiga.
Barnaamijkani ma aha mid ay muhimmadiisu ku kooban tahay taageerada halganka soomaalida Ogadenya oo kaliya, balse wuxuu xanbaarsan yahay macne intaas ka qoddo-dheer. Wuxuu ka turjumayaa in Qaranka kaliya ee soomaalidu u gudboon tahay ee maanta ka jira dhulalka ay soomaalidu degto uu yahay Ogadenya iyo ururkeeda JWXO.
Waxay masuuliyiinta JWXO ee gobolka Minnesota (USA) muujiyeen oo qof walba far waawayn ugu qoreen in JWXO ay ku guulaysatay wixii ay soomaalida kale ku guul-darraysteen, isla markaana ay buuxisay gol-dalooladii (firaaghii) ku timid Qaranimada Soomaaliya intii ay burburtay dawladii Soomaaliya.
Waxaa la wada-ogyahay in gabagbadii barnaamijka ay masuuliyiinta JWXO shahaado sharafyo guddoonsiiyeen hooballadii barnaamijka ka qayb qaatay, arrintaasoo tusaale cad ka bixinaysa martabada JWXO iyo dhaqankeeda hannaanka dawladnimo ku salaysan.
Guushaas waxaa libinteeda iska leh, marka laga soo tego Hooballadii Qaranka ee barnaamijka ka qayb qaatay, madaxda JXWO iyo masuuliyiinta Jaaliyada Ogadenya ee gobolka Minnesota iyo dhammaanba intii ka qayb qaadatay qabanqaabada barnaamijka ”Kaftan maaha kulanka Waaberi ee horta maxaa isu keenay”. Waxaana guyaal badan ku diirsan doono dadwaynaha soomaalida Ogadenya iyo inta jecel xaqa ee ka soo horjeedda dulmiga gumaystaha.
Ahmed Gaal, eri.
Todobaadkan iyo geeska Afrika waxyaabihii ugu waaweeynaa.
Ø Xaaladda Soohdinta Eritrea iyo Itoobiya oo meel halis ah maraysa
Ø Qarax ka dhacay Tareenka Jabuuti iyo Eritrea.
Jabuuti oo ergadeedii kala baxdey shirka dib u heshiisiinta Soomalida
Qarax ka dhacay Tareenka Jabuuti iyo Eritrea.
Qarax geystay dhimaso laba qof ah iyo dhaacaw sagaal qof ah ayaa ka dhacay Tareenka isku xira Jabuuti iyo Itoobiya. Qaaxaas oo dhacay bishii Sept 27, 2003 aaga magaalada Hadhigaale.
Ilaa hada ma cadda ciddka ka danbeysa, in kasta oo dalwada Itoobiya dusha ka saarety Jabhada u dagaalanta Ayaa ka atalinta qoomiyadda Oromoda, taas oo si adag kulul u beenisay
Dadka aad u yaqaana tabaha Maamulka ka taliya Itoobiya waxay sheegayaanxa in uusan shaki ku jirn in arintan ay ka danbeyso dawladda Itoobiya lafteeda. Taas oo doonaysa in ay kaga faa’ideysato kaarka la dagaalanka argagixisada caalamiga.
Xaaladda Soohdinta Eritrea iyo Itoobiya oo mel halis ah maraysa
Todobaadyadan danbe waxaa warbaahinta danaysa Geeska Afrika aad u ahadal hayeen xaaladda shoodinta u dhaxaysa Eritrea iyo Itoobiya, taas oo warbaahinta qaarkood ku tilmaameen in ay marayso meel halis ah.
Haddaba September 13, 2003 ayaa Gudiga Nabadgelyada ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa dib u cusbooneysiin ku sameeyeen waqtigiina u dheereeyeen ciimada ilaaliya soohdinta u dhaxaysa labadaas dal, iyadoo labada wadan loo sheegay in ay khilaafkooda ku xaliyaan qaab wada hadal.
Balse Itoobiya ayaa ka soo taagan in ay qaadato go’aankii gudiga caalamiga ee magaalada Hage, kaas oo labada dalba saxeexeen in u hoganasami doonaan.
Sidoo kale Eritrea ayaa ku baaqdey in Itoobiya lagu soo rogo cuna qabateyn, maadama ay is hortaagaysp go’aankii gudiga caalamku ku soo afjareen soohdinta labada dal. Si kastaba ha ahaatee, Itoobiya ayaa dar dar cusb wada ay ku doonayso in go’aanka gudiga wax laga bedelo.
Diblomaasiyiinta iyo dadka u dhuun daloola arimaha Geeska Afrika waxaa welwel geliyey oo ay la yaabeen isbedelka aan qarsoodiga lahayn ee uu muujiyey Maamulka Adis Ababa, kaas oo uu dhawaan Meles Zenawi qoraal u diray Kofi Anan iyo Gudiga Nabadgelyada ee Jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa,uu ku dalbanaya in gudga Caalamagiga ah iyo go’aamadiisaba wax laga bedelo.
Dhinaca kale Urur fadhigiisu yahay Magaalada Brusseles ee wadanka Belgium oo u ololeeya arimaha nabada ayaa ka codsadey wadanka Maraykkanka, Midowga Afrika iyo MidowgaYurub in ay qaadaan talaabo siyaasadeed oo arinta soohdinta labada dal wx lagaga qabanayo, iyadoo la raacayo heshiiskii Algeris, ururku wuxuu intaas ku daray in wadankii hor istaaga heshiiskii Algeris lagu soo rago cuna qabatey isagu jirta dhaqaale iyo siyaasad.
Jabuuti oo ergadeedii kala baxdey shirka dib u heshiisiinta Soomalida.
Jabuuti oo ka mid ah dawladaha safka hore ee IGAD ayaa ergadeedii kala baxdey shirka dib u heshiisiinta Soomalida ee ka socda duleedka magaalada Nairbi.
Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya oo ka mid ah Gudiga farsamada ee IGAD ayaa shaaca ka qaadey in gudiga farsamada ee IGAD ka leexdeen qaabkii shirku ku socdey, isla markaana aysan dhexdhexaad ka ahayn arinta Soomaaliya. Mudanuhu wuxuu intaas ku daray in aysan dalwadiisu ka sii jri karin waxa uu ugu yearay in ay “horseedi karto dagaal iyo dhiiga oo sii data”, wuxuuna intaas raaciyey in ay ajwaab ka sugayaan dalwadda Kenya oo marti looyahay iyo caalamka nabada jecel.
Dhinaca kale ninka Itoobiya wakiilka uga ah shirka Soomalida ayaa ka bixitaanka Jabuuti shirka ka baxdey ku tilmaamey “in aysan wax saameyn ama raad ah ku yeelanaynin qaabka shirku ku socdo”. Taas oo uu gundhig uga dhigay in shirku hadda marayo meel gabaabsi ah oo ah qaabkii awooda loo qaybsan lahaa.
Balse waxaa hubaal ah in shirka ka socda duleedlka magaalada Nairobi aysan wa natiijo ah ka soo naaso cadeyn xiligan xaadirka ah. Wuxuuna shirku u qaybsamey laba kooxood oo mawqifkoodu aad u kala fogyahay, kuwaas oo ah kuwo lagu tiriyo in ay u janjeedhaan doonista Itoobiya ee ku wajahan natiijada shirka iyo kuwo ka soo horjeeda.